ဂလာတိ သြဝါဒစာ။ – Letter to the Galatians – JESUS UNLTD
ဂလာတိ သြဝါဒစာ။ – Letter to the Galatians
၁ ကျွန်တော်က တမန်တော်ပေါလု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီ ဒီအခွင့်အာဏာကို ပေးခဲ့တာ လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘုရားအမှုတော်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ကျွန်တော့်ဆီ ခန့်အပ်ခဲ့တာ လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ ခရစ်တော်ကို သေခြင်းကနေ ပြန်အသက်ရှင်စေခဲ့တဲ့ အဖဘုရားရှင်က ကျွန်တော့်ကို အစေခံခြင်းအတွက် ရွေးချယ်ပါတယ်။
၂ ကျွန်တော်နဲ့ အတူရှိနေတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေက ဂလာတိမှာရှိတဲ့ ယေရှုယုံကြည်သူတွေကို နှုတ်ဆက်စကား ပါးကြပါတယ်။
၃ အဖဘုရားရှင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင် ယေရှုခရစ်တော်ဆီက ကျေးဇူးတော်နဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်း ရရှိကြပါစေ။
၄ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့အကြံအစည်ကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးတော့ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြစ်တွေအတွက် အသေခံပေးခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုက ဒီလောကမှာရှိတဲ့ မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကနေ ကျွန်တော်တို့ကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။
၅ ခေတ်အဆက်ဆက် လူတိုင်း ဘုရားရှင်ကို ချီးမွမ်းကြပါစေ။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။
၆ ဂလာတိမြို့သားတို့၊ ကျွန်တော် အံ့သြရင်းနဲ့ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ဆီခေါ်ပြီးတော့ ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရှင်ဆီကနေ မြန်မြန်နဲ့ လှည့်ထွက်ကြပြီးတော့ တခြားသတင်းကောင်း နောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။
၇ တကယ်တော့ တခြားသတင်းကောင်းဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို စိတ်ရှုတ်ထွေးစေတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေက ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားစေချင်ကြတယ်။
၈ ကောင်းကင်ဘုံက ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားပြီးတော့ ဟောပြောရင်တော့ ကျိန်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့ဆီကို စစ်မှန်တဲ့သတင်းကို ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားစေခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ကျိန်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မယ်။
၉ ခင်ဗျားတို့ကို ဒီအကြောင်း အရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု ပြန်ပြောပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းအစစ်အမှန်ကို ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ လက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က တခြားသတင်းကောင်းကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ဟောပြောလာရင်တော့ သူဟာ ကျိန်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မယ်။
၁၀ ကျွန်တော် ဘာကို လိုချင်တာလဲ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ သဘောတူညီချက်လား ဒါမှမဟုတ် လူတွေလား။ လူတွေ ကျေနပ်စေဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားနေသလား။ ကျွန်တော်က ခရစ်တော်ရဲ့အစေခံကျွန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ လူတွေကို ကျေနပ်နှစ်သက်စေတဲ့သူ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
၁၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းက လူတွေ ဖန်တီးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိသင့်ပါတယ်။
၁၂ ယေရှုခရစ်တော်က ကျွန်တော့်ကို သဘာဝလွန်နားလည်နိုင်စွမ်း ပေးခဲ့လို့ ဒီသတင်းကောင်းအကြောင်း ဗျာဒိတ်ကို ကျွန်တော် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ဆီကနေ ကျွန်တော် သင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊ လူဆီက မဟုတ်ပါဘူး။
၁၃ အရင်တုန်းက ယုဒလူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာအယူဝါဒကို ကျွန်တော် လိုက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘုရားရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ ယေရှုကိုယုံကြည်သူတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ကို သေစေခဲ့ပါတယ်။
၁၄ ကျွန်တော့် သက်တူရွယ်တူတွေနဲ့ တခြားယုဒလူမျိုးတွေထက် ကျွန်တော်က ယုဒဘာသာကို ပိုပြီးတော့ ဆည်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေ ပေးခဲ့တဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေကို ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ ကျွန်တော် လိုက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၅ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော် မမွေးခင်ကတည်းက ကျွန်တော့်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို သူ့ဆီခေါ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ သူ့ရဲ့အကြံအစည်ကို ပြည့်စုံစေချင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၆ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့်ကို သူ့ရဲ့သားတော်အကြောင်း သဘာဝလွန်နားလည်နိုင်စွမ်းကို ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဒီဗျာဒိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားလူတွေရဲ့ သဘောထားအမြင်ကို ကျွန်တော် မမေးမြန်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေဆီ ဟောပြောဖို့ ကျွန်တော် စတင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၇ ဒီဗျာဒိတ်ကို လက်ခံပြီးပြီးချင်း ဘုရားရှင်က ကျွန်တော့်ထက်အရင် ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ တမန်တော်တွေရှိတဲ့ ယေရုရှလင်မြို့ကို ကျွန်တော်မသွားခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အာရပ်ပြည်ကို သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒမာသက်မြို့ကို ထပ်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၈ သုံးနှစ် အကြာမှာ ယေရုရှလင်မြို့ကို ကျွန်တော် လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်ဟာ တမန်တော် ပေတရုနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတော့ သူနဲ့အတူ တစ်ဆယ့်ငါးရက် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉ သခင်ယေရှုရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ တမန်တော် ယာကုပ်နဲ့လည်း ကျွန်တော် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက အဲ့ဒီမှာ တခြား တမန်တော်တွေနဲ့ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
၂၀ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို အမှန်အတိုင်းရေးတာ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော် မလိမ်ညာဘူးဆိုတာ ဘုရားရှင် သိပါတယ်။
၂၁ အဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့နောက် မြောက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ ရှုရိပြည် နဲ့ ကိလိကိပြည်ရဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေကို ကျွန်တော် လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၂ ယုဒပြည်မှာရှိတဲ့ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတွေက ကျွန်တော့်ကို လူကိုယ်တိုင်နဲ့ မသိကြသေးပါဘူး။
၂၃ ဒါပေမဲ့ “ခရစ်ယာန်တွေကို နှိက်စက်ညှင်းပန်းခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု သူဟာ အရင်က သူလိုက်ဖျက်ဆီးနေခဲ့တဲ့ ယုံကြည်မှုအကြောင်းကိုပဲ ဟောပြောနေတယ်။” ဆိုပြီးေတော့ ကျွန်တော့်အကြောင်းကို သူတို့တွေ ကြားကြပါတယ်။
၂၄ အဲ့ဒါကြောင့် ယုဒပြည်မှာရှိတဲ့ ယေရှုယုံကြည်သူတွေက ကျွန်တော့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားရှင်ကို ချီးမွမ်းကြပါတယ်။ 1 I am an apostle Paul. It was not people who gave me this authority. It was not people who appointed me to this ministry. Jesus Christ and God the Father who raised Christ from the dead chose me for the ministry.
2 There are some brothers here with me, and they are sending greetings to the churches in Galatia.
3 Receive grace and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ.
4 Our God the Father fulfilled His plan, and Christ died for our sins. Jesus delivered us from the evil which lives in this world.
5 May everyone praise God throughout all the ages. Amen.
6 Galatians, I am unpleasantly surprised. God gave you the calling and the grace of Christ. But you turned away from God so quickly and followed some other “good news”.
7 However, there is no other “good news”. But there are people who confuse you. They want to distort the Good News about Christ.
8 Ifaheavenly angel distorts the Good News about Christ and preaches it then he will inviteacurse to himself. We brought you the true News. But we also will inviteacurse to ourselves if we distort the Good News about Jesus.
9 I told you about it before, and I repeat it now. You received from us the true News about Christ. But if someone preaches to you some other “good news” then he invitesacurse to himself.
10 What do I want to have? An approval of God or people? Do I try to please people? I becameaslave of Christ, so I do not please people anymore.
11 Brothers, I preached to you the Good News about Christ. You should know that it was not people who made it up.
12 I got to know the Good News through the revelation of Jesus Christ. I learned from Christ, not from man.
13 In the past, I followed the Jewish religion. And you know what I was doing at that time. I violently persecuted the Church of God and destroyed it.
14 I devoted myself to Judaism much more than the people of my age and other Jews. I showedagreat zeal towards the traditions which our fathers gave us.
15 But God chose me even before I was born. He gave me His calling and grace. God wanted to fulfilled His plan in my life.
16 That is why He gave mearevelation about His Son. And at that time I did not ask the opinion of other people about this revelation. But I began to preach the Good News about Christ to the Gentiles.
17 Immediately after this revelation I did not go to Jerusalem to the apostles whom God put in this ministry before me. But I went to Arabia, and then I returned to the city of Damascus again.
18 Three years later I came to Jerusalem. There I met with the apostle Peter and spent fifteen days with him.
19 I also met with the apostle James who was the brother of the Lord. At that time I did not meet with the other apostles there.
20 God knows that I write you the truth, and I do not lie.
21 After that I went north into the provinces of Syria and Cilicia.
22 The churches of Christ in Judea did not know me personally.
23 But this is what they heard about me, “There isaman who used to persecute Christians. But now he preaches the same faith which he was destroying before.”
24 And the churches in Judea glorified God for me.
၁ တစ်ဆယ့်လေးနှစ်အကြာမှာ ဗာနဗနဲ့အတူ ယေရုရှလင်မြို့ကို ကျွန်တော် ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ တိတုက ကျွန်တော်နဲ့အတူ လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။
၂ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေဆီ သတင်းကောင်းဟောပြောဖို့လိုတယ်လို့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ပေးခဲ့တဲ့ ဒီဗျာဒိတ်ကြောင့် ယေရုရှလင်မြို့ကို ကျွန်တော် သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အသင်းတော်ကို သြဇာညောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကျွန်တော် လူချင်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေဆီ ခရစ်တော်အကြောင်းသတင်းကောင်း ကျွန်တော် ဟောပြောတဲ့နည်းလမ်းကို သူတို့ဆီ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကြားမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ မရှိဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော် သေချာစေချင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘုရားအစေခံခြင်းအပေါ် သူတို့တွေကို အသိအမှတ် ပြုစေချင်ခဲ့ပါတယ်။
၃ ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် တိတုက ယုဒလူမျိုးတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ အသင်းတော်လူကြီးတွေက သူ့ကို အရေဖျားလှီးဖို့ အတင်းမတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါဘူး။
၄ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ အရေးဖျားလှီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော်တို့တွေ စပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့က ယုံကြည်သူတွေ ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစည်းအဝေးတွေကို လာကြတယ်။ သူတို့တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရယူပြီးတော့ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို ပေးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ဖယ်ရှားချင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအယောင်ဆောင်တဲ့ ယေရှုယုံကြည်သူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့ ယုဒဘာသာဓလေ့ထုံးတမ်းတွေရဲ့ ကျွန်ဖြစ်စေချင်ခဲ့ကြတယ်။
၅ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကို မလိုက်နာခဲ့ကြပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က သူတို့တွေရဲ့သွန်သင်ချက်နောက်ကို တစ်ချက်ကလေးမှ မလိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဆီ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အမှန်တရားကို ကျွန်တော်တို့တွေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။
၆ အသင်းတော်ရဲ့အထူးလေးစားခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရှေ့မှာ အမှန်တရားကို ကျွန်တော် ကာကွယ်ခုခံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရာထူးတွေက ကျွန်တော့်အတွက် အထူးအခြား မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့အမှန်တရားကို ပြောင်းလဲရလောက်အောင် ထူးခြားတဲ့လူမရှိပါဘူး။ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေက ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဗျာဒိတ်အပေါ် ဆန့်ကျင်မှုမရှိခဲ့ကြပါဘူး။
၇ ကျွန်တော် နောက်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ပေတရုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်က မတူညီတဲ့လူအစုအဖွဲ့တွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့တာ သူတို့တွေ တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ပေတရုက ယုဒလူမျိုးတွေဆီ ခရစ်တော်အကြောင်း ဟောပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်က ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေဆီ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
၈ ဘုရားသခင်က ပေတရုကို ယုဒလူမျိုးတွေရဲ့ တမန်တော်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတော့ ဘုရားရှင်က ပေတရုအားဖြင့် ယုဒလူမျိုးကြားမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဘုရားသခင်ကပဲ ကျွန်တော့်ကို ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေအတွက် တမန်တော်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်အားဖြင့် ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကြားမှာလည်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
၉ ယာကုပ်၊ ပေတရု နဲ့ ယောဟန် တို့က အသင်းတော်ရဲ့အုတ်မြစ်တွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံကြရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကိုပေးခဲ့တဲ့ ဆုလက်ဆောင်ကို သူတို့တွေ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက တူညီတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ သူတို့တွေ သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားလူမျိုးတွေဆီ သွားပြီးတော့ သူတို့က ယုဒလူမျိုးတွေဆီ သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေကို သတိရပြီးတော့ ကူညီကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ ကျွန်တော် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
၁၁ ဒါပေမဲ့ အန္တိအုတ်ကို ပေတရု လာခဲ့တုန်းက သူက မှားနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော် သူ့ကို လူသိရှင်ကြား ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၂ အစက ပေတရုက ယေရှုကိုယုံကြည်သူ အရေဖျားမလှီးတဲ့ တခြားလူမျိုးတွေနဲ့အတူ စားသောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တော့ လူတစ်ချို့ ယာကုပ်ဆီကနေ ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က ယေရှုကိုယုံကြည်သူတွေဟာ အရေဖျားလှီးခြင်းကို လုပ်သင့်တယ်လို့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ပေတရုက ဒီလူတွေ ဝေဖန်မှာကို ကြောက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ပေတရုက တခြားလူမျိုးတွေကို ရှောင်ဖယ်လာပြီးတော့ သူတို့နဲအတူ စားသောက်တာမျိုး မလုပ်တော့ဘူး။
၁၃ ပေတရုက စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ မပြုမူခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ တခြား ယုဒလူမျိုးယုံကြည်သူတွေလည်း ပေတရု လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကို လိုက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဗာနဗ တောင်မှ ဒီအယောင်ဆောင်တဲ့သူတွေဆီ ပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
၁၄ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အမှန်တရားဆီကနေ သူတို့တွေ လမ်းလွဲနေတာကို ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအားလုံးရှေ့မှာ “ပေတရု၊ ခင်ဗျားဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ။ ခင်ဗျားက ယုဒလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ခင်ဗျားဟာ ယုဒဓလေ့ထုံးစံတွေကို မကျင့်တော့ဘဲနဲ့ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေလိုပဲ အသက်ရှင်နေထိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားက ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေကို ယုဒဓလေ့ထုံးစံတွေကျင့်ဖို့ အတင်းတိုက်တွန်းနေတယ်။” လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၅ ကျွန်တော်တို့ဟာ ယုဒလူမျိုးအဖြစ် မွေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ မောရှေရဲ့ပညတ်က သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေ လိုက်နာခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေ လုပ်ကြသလို ကျွန်တော်တို့တွေက အပြစ်မလုပ်ကြဘူးလို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၆ ဒါပေမဲ့ အခု ဘုရားသခင်က မောရှေရဲ့ပညတ်ချက် လိုက်နာတဲ့သူတွေကို အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်ခြင်းမပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သူတို့ဆီ မပေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေကို အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်ခြင်း ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သူတို့ဆီ ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပေးခဲ့တယ်။ ဘယ်လူသားမှ မောရှေပညတ်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို ပြည့်စုံအောင် မလိုက်နာနိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီမောရှေရဲ့ပညတ်ချက်ကို အခြေခံရင်တော့ အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဘယ်လူသားမှ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၇ ကျွန်တော်တို့ဟာ ယုဒလူမျိုး ဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မောရှေရဲ့ပညတ်ကို လိုက်နာခဲ့ကြလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်အားဖြင့်သာ ဘုရားရှင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ ဝန်ခံပြီးတော့ ခရစ်တော်ဆီ လာခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒါဆို ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်သားတွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုနေသလား။ မဆိုလိုပါဘူး။
၁၈ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ တကယ်လို့ ကျွန်တော်က ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ပြီးတော့ မောရှေရဲ့ပညတ်ဆီ ပြန်သွားရင်တော့ ကျွန်တော်က အပြစ်သား ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
၁၉ မောရှေပညတ်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြည့်စုံအောင် ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပညတ်က သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အသေသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို အသက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားအတွက် အသက်ရှင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိကို ခရစ်တော်နဲ့အတူ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေသတ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀ ကျွန်တော့်ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိက သေသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ကျွန်တော့်အထဲမှာ ခရစ်တော်က အသက်ရှင်ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ကျွန်တော့်ကို ချစ်လို့ ကျွန်တော့်အတွက် သူ့ရဲ့အသက်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောကမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကျွန်တော် အသက်ရှင်နေထိုင်နေပေမဲ့ ဘုရားရဲ့သားတော်ဆီမှာတော့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်နေပါတယ်။
၂၁ ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်တော် ငြင်းပယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မောရှေရဲ့ပညတ် လိုက်နာတဲ့သူတွေကို ဘုရားသခင်က အပြစ်ကနေ လွတ်လပ်မှုပေးတယ်၊ ပြီးတော့ ဒီအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သူတို့ဆီ ပေးတယ် ဆိုပါစို့။ ဒီလိုဆိုရင် ခရစ်တော်က ဘာဖြစ်လို့ အပြစ်သားတွေအတွက် အသေခံနေရဦးမှာလဲ။ 1 In fourteen years I again went to Jerusalem with Barnabas. And this time Titus came with me.
2 I decided to go to Jerusalem because of the revelation which God gave me about the Gentiles. I personally met with the influential Church leaders there. I told them about the way I preach the Good News about Christ to the Gentiles. I wanted to make sure that there was no disagreement between us, and that they recognize my ministry.
3 My companion Titus wasaGentile. But Church leaders did not force him to circumcise.
4 And this is why the question about circumcision came up. Some people pretended to be believers and visited our meetings. They gained our trust and wanted to take away our freedom which Christ gave us. These false believers wanted to make us slaves of their Jewish traditions.
5 But we did not yield to them and did not submit to their teaching forasingle moment. We preserved for you the truth which God revealed to us through the Good News about Christ.
6 I defended the truth in front of the highly respected leaders of the church. And it was nothing special to me. There are no such special people because of whom God would change His truth. But the leaders of the church had nothing against my revelation.
7 And I will say even more. They compared me to Peter. They saw that God entrusted us with different groups of people. I preach the Good News to the Gentiles. And the same way Peter preaches about Christ to the Jews.
8 God appointed Peter as an apostle for the Jews. And He works through Peter among the Jews. And the same God appointed me as an apostle to the Gentiles. And He also works through me among the Gentiles.
9 James, Peter and John are recognized as pillars of the Church. And they recognized the gift which God gave me. They agreed that we do common work. But we go to the Gentiles, and they go to the Jews.
10 They asked us to remember about the poor and to help them. But even before I made every effort to help the poor.
11 But when Peter came to Antioch, I publicly opposed him because he was wrong.
12 In the beginning, Peter ate with uncircumcised Gentiles who believed in Jesus. But later some people came from James. They were convinced that believers should do circumcision. And Peter was afraid of criticism from these people. So Peter started avoiding the Gentiles and stopped eating with them.
13 The other Jew believers followed the same double standards as Peter did. And even Barnabas joined them in this hypocrisy.
14 I saw that they were turning away from the truth which God revealed to us through the Good News about Christ. Then I said in front of everyone, “Peter, what are you doing? You areaJew. But now you do not keep the Jewish laws. You live likeaGentile. But you force the Gentiles to practice the Jewish traditions.”
15 We were born as Jews. We followed what the Law of Moses required. So we thought that we do not sin as the Gentiles do.
16 But now we know that God does not set free from sin those who keep the Law of Moses. So God does not give them His righteousness. But God gives freedom from sin to those who believe in Jesus Christ. And God gives them His righteousness. We believed in Christ. And through our faith God set us free from sin and gave us His righteousness. No man can fulfill the requirements of the Law of Moses. So no man will get freedom from sin and God's righteousness on the basis of the Law of Moses.
17 We are Jews. We kept the Law of Moses, and that is why we considered ourselves righteous. But through Christ we found the righteousness of God. We confessed that we are sinners and came to Christ. Does it mean that Christ made us sinners? No.
18 On the opposite, I will becomeasinner if I reject Christ and return to the Law of Moses.
19 I could not keep the Law of Moses. The Law killed me with its requirements. But God gave me life, and now I live for Him. I crucified my sinful nature together with Christ.
20 My sinful nature died, and now Christ lives in me. He loved me and gave His life for me. I live in this world inaphysical body, but I live by faith in the Son of God.
21 I will not reject the grace of God. Suppose that God gives freedom from sin to those who keep the Law of Moses. And through this God gives them His righteousness. In this case, what is the point for Christ to die for sinners?
၁ ဂလာတိမြို့သားတို့၊ တကယ်ကို အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးပဲ။ ဘုရားရဲ့အမှန်တရားကို ဆန့်ကျင်ရအောင် ဘယ်သူက ခင်ဗျားတို့ကို လုပ်လိုက်တာလဲ။ ခင်ဗျားတို့က လိမ်ညာလှည့်ဖြားတဲ့သူတွေကို ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ ခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့အတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခဲ့တယ်ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့သလိုပဲ ခင်ဗျားတို့တွေ ကောင်းကောင်း သိနားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂ အတိတ်က မောရှေရဲ့ပညတ်ချက်ကို ခင်ဗျားတို့တွေ လိုက်နာခဲ့ကြတယ်။ အခု ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းတစ်ခု ဖြေပေးကြပါ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ ဖြည့်ပေးခဲ့သလား။ နောက်တော့ ခရစ်တော်အကြောင်းကို ခင်ဗျားတို့တွေ ကြားပြီးတော့ သူ့ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃ အစက ဘုရားရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော် ဆန္ဒအတိုင်း ခင်ဗျားတို့ ပြုမူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ခင်ဗျားတို့က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ ဇာတိဟောင်းကို အသက်ပြန်သွင်းခဲ့ကြတယ်။ ဘာလို့ ခင်ဗျားတို့တွေက ဒီလို မိုက်မဲတဲ့အရာကို လုပ်ခဲ့ကြတာလဲ။
၄ ခင်ဗျားတို့ ဆင်းရဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ အသက်ရှင်တဲ့ဘဝက ခင်ဗျားတို့ကို ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှ မပေးခဲ့ဘူးလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကို ခင်ဗျားတို့ တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
၅ အတိတ်က မောရှေရဲ့ပညတ်ချက်ကို ခင်ဗျားတို့တွေ လိုက်နာခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ ဖြည့်ပေးခဲ့သလား။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ခင်ဗျားတို့အကြားမှာ ဘုရားသခင်က အံ့သြဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတွေ လုပ်ခဲ့သလား။ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တော့ ခင်ဗျားတို့တွေက ခရစ်တော်အကြောင်းကို ကြားပြီးတော့ သူ့ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါကျမှ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့အကြားမှာ အံ့သြဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ စတင်လာခဲ့ပါတယ်။
၆ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ အာဗြဟံက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို တွေ့တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အာဗြဟံဆီ ပေးခဲ့ပါတယ်။
၇ ယုံကြည်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ကို အာဗြဟံရဲ့သားတွေ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ နားလည်သင့်ပါတယ်။
၈ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားလူမျိုးတွေက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျမ်းစာက ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတစ်ဆင့် သူတို့ကို အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်စေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ဒီသတင်းကောင်းကို အာဗြဟံဆီ ကြိုတင်အသိပေးကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က “အာဗြဟံ၊ သင့် အားဖြင့် လူမျိုးအားလုံးကို ငါ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၉ အာဗြဟံက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘုရားသခင်က သူ့ကို ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် အာဗြဟံကို ကောင်းကြီးပေးခဲ့သလိုပဲ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၀ မောရှေက ပညတ်ချက်စာအုပ်ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ယုဒလူမျိုးတွေက မောရှေရဲ့ပညတ် လိုက်နာပြီးတော့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိဖို့ မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ “မောရှေရဲ့ ပညတ်ချက်အားလုံးကို မလိုက်နာတဲ့သူက ကျိန်ခြင်း အောက်မှာရှိတယ်။” လို့ ကျမ်းစာက ပြောတဲ့အတွက် သူတို့အားလုံးက ကျိန်ခြင်းအောက်မှာရှိကြတယ်။
၁၁ မောေရှေပညတ် လိုက်နာတဲ့သူကို ဘုရားသခင်က အပြစ်ကနေ မလွတ်မြောက်စေဘူးဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မပေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယေရှုကို ယုံကြည်တဲ့သူကိုတော့ ဘုရားသခင်က အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူဆီ ပေးပါတယ်။ ဖြောင့်မတ်တဲ့သူက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီးတော့ ဘုရားရှင်အတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်ပါတယ်။
၁၂ ဒါပေမဲ့ မောရှေပညတ်က ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ပညတ်ချက်က ယုံကြည်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ လူတွေ လိုက်နာဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပညတ်ချက်ကို လိုက်နာတဲ့သူက အဲ့ဒီပညတ်ချက်အတွက် အသက်ရှင်တယ်။
၁၃ မောရှေပညတ်ချက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ “သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကားတိုင်မှာ သေဒဏ်စီရင်ခံရတဲ့သူတိုင်းဟာ ကျိန်ခြင်း ခံရတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။” ဆိုတဲ့ ကြိုတင်ဟောပြောချက်ကို ခရစ်တော်က ပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က မောရှေရဲ့ပညတ်ချက်အားလုံးကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပေမဲ့ သူက ကျိန်ခြင်းနဲ့ မထိုက်တန်ခဲ့ပါဘူး။ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ အစား လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ ကျိန်ခြင်းကို ခံယူခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ ပေးချေခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ပညတ်ချက်ရဲ့ကျိန်ခြင်းကနေ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၄ ပြီးတော့ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေဆီကို အာဗြဟံရဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေးဖို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့က သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
၁၅ ညီအစ်ကိုတို့၊ လူတိုင်းသိတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်က သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို စည်းမျဉ်းတွေအရ လုပ်ရင်၊ ဒီလိုမျိုး သဘောတူညီချက်ကို လူတွေက အသိအမှတ်ပြု လက်ခံကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သဘောတူညီချက်ကို ဘယ်သူကမှ မပြောင်းလဲသလို ဘာမှ ထပ်မထည့်ကြတော့ပါဘူး။
၁၆ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံနဲ့ ချိုးဖျက်လို့မရတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံနဲ့ သူ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသားကို ကတိတော်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က သားအများကြီးအကြောင်း မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က သားတစ်ယောက်တည်းအကြောင်းကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အကြောင်းကို ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံဆီပေးခဲ့တဲ့ ကတိတော်တွေကို ခရစ်တော်က အမွေဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။
၁၇ နားထောင်ကြပါ။ အစမှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံနဲ့ ချိုးဖျက်လို့မရတဲ့သဘောတူညီချက်ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘုရားသခင်က အဗြဟံကို ခရစ်တော်အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၄၃၀ အကြာမှပဲ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ပညတ်ချက်ကို မောရှေကတစ်ဆင့် ယုဒလူမျိုးတွေဆီ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညတ်ချက်က အစောပိုင်းမှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ ချိုးဖျက်လို့မရတဲ့သဘောတူညီချက်ကို မပယ်ဖျက်ပါဘူး။
၁၈ ဘုရားသခင်က မောရှေပညတ်ချက် လိုက်နာတဲ့သူတွေကို အမွေဥစ္စာပေးခဲ့မယ် ဆိုပါစို့။ ဒီလိုဆိုရင် ဘုရားသခင်က အာဗြဟံဆီက ဒီအမွေဥစ္စာကို ယူသွားရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၄၃၀ မှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံနဲ့ ချိုးဖျက်လို့မရတဲ့သဘောတူညီချက်ကို လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ပြီးတော့ ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံကို အမွေဥစ္စာပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၉ ဒီလိုဆိုရင် ဘုရားသခင်က ဘာလို့ ပညတ်ချက်ကို ပေးခဲ့တာလဲ။ အစမှာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံကို သားတစ်ယောက်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အကြောင်းကို ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေက အပြစ်လုပ်ကြလို့ ဘုရားသခင်က ပညတ်ချက်ကို ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မောရှေရဲ့ပညတ်ချက်က ကတိအတိုင်းရတဲ့ အာဗြဟံရဲ့သားတော် လာတဲ့အချိန်အထိပဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကို အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ သူတို့က ပညတ်တော်ကို မောရှေဆီ ယူလာခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ မောရှေက ပညတ်တော်ကို ရေးသားခဲ့ပြီးတော့ လူတွေနဲ့ဘုရားရှင်ကြားမှာ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေပေးသူ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
၂၀ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေပေးသူက နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံနဲ့ ကတိပြုတုန်းက ကြားဝင်ဖျန်ဖြေပေးသူကို အသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက ဘုရားသခင်က သူ့အကြောင်းကိုသူ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ဒါကြောင့် မောရှေက လူတွေဟာ ပညတ်ချက်ကို လိုက်နာကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ အာဗြဟံက ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ကတိတော်တွေကို ယုံကြည်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ ဒါက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆန့်ကျင်နေကြသလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က အသက်ကိုယူလာပေးတဲ့ ဒီလိုမျိုး ပညတ်ချက်ကို ပေးမယ်ဆိုပါစို့။ ဒီလိုဆို ဒီပညတ်ချက်ကို လိုက်နာတဲ့သူတွေကို ဘုရားသခင်က အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်စေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးလိမ့်မယ်။
၂၂ ဒါပေမဲ့ လူတွေအားလုံးက အပြစ်ရဲ့တန်ခိုးအောက်မှာရှိကြလို့ ဘုရားသခင်က ပညတ်ချက်ကို ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ ကျမ်းစာက ပြောပါတယ်။ ပညတ်ချက်အရ လူတွေက သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက် ယစ်ကောင်တွေကို ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။ ယစ်ကောင်တွေက လူတွေကို အပြစ်ကနေ မလွတ်မြောက်စေခဲ့ပေမဲ့ ဒီယစ်ကောင်တွေက ခရစ်တော်ကို ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က မောရှေဆီကို ခရစ်တော်အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံဆီကို ခရစ်တော်အကြောင်း ပြောခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံဆီ သူပေးခဲ့တဲ့ကတိတော်ကို ခရစ်တော်ဆီမှာ ပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ဆီ ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၃ အချိန်အတန်ကြာတဲ့အထိ မောရှေပညတ်ရဲ့ချည်နှောင်ခြင်းအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကာလ ရောက်လာပြီးတော့ မောရှေပညတ်ချက်ကာလ ပြီးဆုံးသွားတယ်။
၂၄ မောရှေပညတ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ကို ခရစ်တော်ဆီ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြလို့ ဘုရားရှင်က အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်စေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ဆီ ပေးပါတယ်။
၂၅ အခုတော့ ယုံကြည်ခြင်းကာလ ရောက်လာခဲ့လို့ မောရှေပညတ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကို မစိုးမိုးတော့ဘူး။
၂၆ ယေရှုခရစ်တော်ကို ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားသခင်ဆီကနေ ဖြစ်ဘွားတဲ့ ဘုရားရဲ့သားတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
၂၇ ခရစ်တော်နာမည်နဲ့ ခင်ဗျားတို့အားလုံး ရေဗတ္တိဇံကို ခံခဲ့ကြတယ်။ ခရစ်တော်အားဖြင့် ခင်ဗျားတို့အားလုံးက ဘုရားသခင်ရဲ့ သဘောသဘာဝအသစ်ကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူအပေါ် ယူတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။
၂၈ အခု ယေရှုခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို သူ့ဆီမှာ စည်းလုံးစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ်တော်ဆီမှာ ယုဒလူမျိုး ဒါမှမဟုတ် တခြားလူမျိုးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ခရစ်တော်ဆီမှာ ကျွန် နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့သူကြားမှာ ဘာခြားနားမှုမှ မရှိဘူး။ ခရစ်တော်ဆီမှာ ခင်ဗျားတို့တွေက ယောကျ်ားလား၊ မိန်းမလားဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။
၂၉ အခု ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့က အာဗြဟံရဲ့ မျိုးဆက်တွေဖြစ်ကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့က အာဗြဟံရဲ့ အမွေစားအမွေခံတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံကို ပေးဖို့ ကတိပေးခဲ့တဲ့အရာကို ခင်ဗျားတို့တွေ ရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ 1 Galatians, whatanonsense? Who made you go against the truth? You believed the liars. Christ died for you on the cross. And you realized it so deeply as if you saw it with your own eyes.
2 In the past, you kept the Law of Moses. Now answer me one question. Did God fill you with His Spirit at that time? But later you heard about Christ and believed in Him. And after that God gave you His Spirit.
3 In the beginning you acted according to the desire of the Holy Spirit. But now you brought your old sinful nature back to life. Why did you do suchastupid thing?
4 You went throughalot of trials. Did the life in the Holy Spirit bring you no benefit at all? Of course, you could see the result!
5 In the past, you kept the Law of Moses. But did God fill you with His Spirit at that time? But did God work miracles among you at that time? No. But later you heard about Christ and believed in Him. And then God gave you His Spirit. And then God began to work miracles among you.
6 The same way Abraham believed God. God saw his faith and gave Abraham His righteousness.
7 You should understand that faith makes us the sons of Abraham.
8 The Scriptures predicted that the Gentiles would believe in God. And through faith God would set them free from sin and give them His righteousness. In advance God proclaimed this Good News to Abraham. God said, “Abraham, I will bless all the nations through you.”
9 Abraham believed God, and God blessed him. And we also believed God, and God blessed us the same way He blessed Abraham.
10 Moses wrote the Book of the Law. The Jews keep the Law of Moses and expect to receive righteousness. But they fall under the curse because the Scriptures say, “He who does not keep the whole Law of Moses falls under the curse.”
11 It is obvious that God does not free from sin the one who keeps the Law of Moses. So God does not give him His righteousness. But God set free from sin the one who believes in Jesus. And God gives His righteousness to the believer. The righteous person believes in God. The righteous person lives for God.
12 But the Law of Moses has nothing to do with faith. There is no need to believe in the Law. People must keep the Law. And the one who keeps the Law lives for it.
13 Christ fulfilled the prophecy which the Law of Moses speaks about, “Everyone who is executed onawooden crossbar falls under the curse.” But Christ fulfilled all the Law of Moses, and He did not deserve the curse. On the cross Christ fell under the curse instead of us. He paid for our freedom with His blood. Christ saved us from the curse of the Law.
14 And the blessing of Abraham spread to the Gentiles through Jesus Christ. God promised to give us the Holy Spirit, and we received Him through faith.
15 Brothers, I tell you what everyone knows about. People recognize as valid the agreement whichaperson makes according to the rules. And no one changes such an agreement and adds nothing to it.
16 God made the Unbreakable Agreement with Abraham. In this Agreement God gave the promises to Abraham and to his only son. But God did not speak about many sons. God spoke about the only Son, God spoke about Christ. Christ inherited the promises which God gave to Abraham.
17 Listen, at first, God made the Unbreakable Agreement with Abraham, and at the same time God told Abraham about Christ. 430 years passed, and only after that God gave His Law to the Jews through Moses. But the Law does not cancel the Unbreakable Agreement which God previously made with Abraham.
18 Suppose that God would give the inheritance to those who keep the Law of Moses. In this case, God must take this inheritance away from Abraham. But 430 years ago God already made the Unbreakable Agreement with Abraham. And God promised in this Agreement that He would give the inheritance to Abraham.
19 Then why did God give the Law? At first, God promised to Abraham that He would give himaSon. God spoke about Christ. But people sinned so later God gave them the Law. The Law of Moses worked only till the time when the promised Son of Abraham came. God commanded to His angels, and they brought the Law to Moses. And Moses wrote the Law and became the mediator between God and the people.
20 The mediator represents the interests of the two parties. But when God madeapromise to Abraham, He did not useamediator. God spoke about Christ, and it means that God spoke about Himself.
21 So Moses says that people must keep the Law. And Abraham says that we must believe in the promises of God. Does it contradict each other? No! Suppose that God would give suchaLaw which brings life. Then God would set free from sin those who keep the Law. And God would give them His righteousness.
22 But the Scriptures say that all people are under the power of sin, that is why God gave the Law. According to the Law people offered sacrifices for their sins. The sacrifices did not set people free from sin, but the sacrifices pointed out to Christ. God spoke about Christ to Moses. God spoke about Christ to Abraham. And in Christ God fulfilled the promise which He gave to Abraham. We believe in Jesus Christ, that is why God sets us free from sin. And God gives us His righteousness through faith.
23 Untilacertain time we lived in the captivity of the Law of Moses. But then the time of faith came, and the time of the Law of Moses finished.
24 The Law of Moses directed us to Christ. Now we believe in Jesus, so God sets us free from sin and gives us His righteousness.
25 Now the time of faith came, and the Law of Moses rules our lives no longer.
26 When you believed in Jesus Christ, you were born of God and became His sons.
27 All of you took water baptism in the name of Christ. And in Christ all of you put the new nature of God on your inner person.
28 Now Jesus Christ united all of us in Himself. So in Christ there is neither Jew nor Gentile. So in Christ there is no difference between slave and free person. So in Christ it does not matter if you areaman orawoman.
29 Now you belong to Christ. So you are the descendants of Abraham. So you are the heirs of Abraham. And that is why you get what God promised to give to Abraham.
၁ မိသားစုမှာ အဖေတစ်ယောက် ဆုံးသွားတယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီအခါ အမွေအားလုံးက သူ့ကလေးဆီကို ရောက်သွားပါတယ်။ အမွေစားအမွေခံသားက အမွေဥစ္စာအားလုံးအပေါ်မှာ သခင်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ သူရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကာလက ကျွန်တစ်ယောက်နဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှု မရှိပါဘူး။
၂ အမွေဆက်ခံရရှိတဲ့ကလေးက သူ့ရဲ့ယာယီအုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်စီမံသူတွေကို နာခံရပါတယ်။ သူ့အဖေ သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ အသက်အရွယ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှ သူ့ရဲ့အမွေဆက်ခံခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃ ဒီဥပမာနဲ့ ခရစ်တော် လောကကို မကြွလာခဲ့သေးခင်အချိန်ကာလကို ကျွန်တော် နှိုင်းယှဉ်ပြချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့က ရင့်ကျက်တဲ့အသက်အရွယ်ကို မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ကလေးတွေလိုပဲ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာပြီးတော့ ဒီလောကြီးထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၄ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကို သတ်မှတ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မာရိက ဘုရားရဲ့သားတော်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသားတော်က မောရှေပညတ်ရဲ့ အခွင့်အာဏာအောက်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၅ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်း ဒီပညတ်ရဲ့ အခွင့်အာဏာအောက်မှာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်က ပညတ်ချက်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို အကုန်ပြည့်စုံစေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက် သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ ဆပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် ဆပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မောရှေရဲ့ပညတ်က ကျွန်တော်တို့ အပေါ် အခွင့်အာဏာသက်ရောက်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို မွေးစားခဲ့လို့ သားသမီးတွေရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အကုန်လုံးကို ကျွန်တော်တို့တွေ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
၆ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရဲ့ သားတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့နှလုံးသားဆီ သူ့ရဲ့သားတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့သားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်က ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်ကို “အဖေ ၊ အဖေ။” လို့ခေါ်ပါတယ်။
၇ နားထောင်ကြပါ။ အခု ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ရဲ့သားလို့ခေါ်ပါတယ်၊ ကျွန်တစ်ယောက်လို့ မခေါ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရဲ့သား ဖြစ်လာကြပြီးတော့ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားရဲ့ အမွေစားအမွေခံ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
၈ အတိတ်က ခရစ်တော်မပါဘဲ ခင်ဗျားတို့တွေ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကို မသိခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တွေလိုပဲ မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေကို ခင်ဗျားတို့ နာခံခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေက ဘုရားသခင်ရဲ့နေရာကို အစားဝင်မယူသင့်ဘူး။
၉ အခု ခင်ဗျားတို့က ဘုရားသခင်ကို သိကြတယ်။ ပြီးတော့ အခု ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေက ခင်ဗျားတို့ကို မခိုင်မာစေခဲ့ပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က အဲ့ဒါတွေဆီကိုပဲ ပြန်လှည့်ကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို ဘာအကျိုးမှမပေးတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ခင်ဗျားတို့ လိုက်နာကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေရဲ့ ကျွန်တွေ ထပ်ဖြစ်ချင်ကြတာလဲ။
၁၀ ဘာဖြစ်လို့ ရက်တွေ၊ လတွေ နဲ့ ရာသီတွေကို ခင်ဗျားတို့တွေ တအားအာရုံစိုက်ကြတာလဲ။
၁၁ ခင်ဗျားတို့ အကြားမှာ ကျွန်တော် အရမ်းကြိုးစားပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အလုပ်တွေ ဘာရလဒ်မှ မရခဲ့တာကို ကျွန်တော် ကြောက်မိတယ်။
၁၂ ကျွန်တော်က ယုဒလူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့က တခြားလူမျိုးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ယုဒဓလေ့ထုံးစံတွေလိုက်နာမှုကို ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့လိုပဲ ဖြစ်လာပါပြီ။ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော့်လိုပဲ လွတ်လပ်မှုထဲမှာ အသက်ရှင်ကြဖို့ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် တောင်းဆိုပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီ ပထမအကြိမ်လာခဲ့တုန်းက ခင်ဗျားတို့တွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံခဲ့ကြတယ်။
၁၃ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော် ဖျားနေခဲ့ပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ဆီ ခရစ်တော်အကြောင်းသတင်းကောင်း ဟောပြောနေခဲ့တာကို သတိရကြပါ။
၁၄ ကျွန်တော့် ကျန်းမာရေအခြေအနေက ခင်ဗျားတို့အတွက် စမ်းသပ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော့်ကို အထင်သေးပြီးတော့ မပြောဆိုခဲ့ကြဘူး။
ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော့်ကို မနှစ်မြို့စွာနဲ့ မကြည့်ခဲ့ကြဘူး။ အဲ့ဒီအစား ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော့်ကို ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးလို လက်ခံခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ယေရှုခရစ်တော်အတိုင်း ခင်ဗျားတို့ ဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်။
၁၅ ခင်ဗျားတို့က ဒီလိုမျိုး ကြင်နာမှုကို ကျွန်တော့်အပေါ် ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကို တခြားလူဆီ ပေးလိုက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော့်အတွက် ဒီလိုတောင် လုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်မှုရှိရှိ ပြောရဲပါတယ်။
၁၆ ဒါပေမဲ့ အခု အမှန်တရားကို ပြောပြလို့ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရန်သူ ဖြစ်သွားပြီလား။
၁၇ ခင်ဗျားတို့တွေက မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ လိမ်ညာလှည့်ဖြားသူတွေကို ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအယူလွဲနေတဲ့ ဆရာတွေက မနာလိုပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့သြဇာညောင်းမှုကနေ ခင်ဗျားတို့ကို ကာကွယ်ကြတယ်။ သူတို့က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုရဖို့ လိုချင်ကြတယ်။
၁၈ ကောင်းတဲ့လူတွေက ကောင်းတာကိုပဲ အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ တခြားလူတွေက သူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိမ်ညာတဲ့လူတွေကတော့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ဆီကနေ ထွက်သွားတဲ့အခါ ထိခိုက်နစ်နာစရာကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ယူလာကြတယ်။
၁၉ ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ သားသမီးတို့၊ ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာ ခရစ်တော်ရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တော်ကို မမြင်ရမချင်း ကျွန်တော်က ဒုက္ခဝေဒနာတွေ ပြန်ခံစား ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ပြန်မွေးဖွားရပါတယ်။
၂၀ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့နဲ့ အတူရှိချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို လေးလေးနက်နက် စကားစမြည်ပြောချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး။
၂၁ ခင်ဗျားတို့က မောရှေပညတ်ချက်အတိုင်း အသက်ရှင်ချင်ကြတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြကြပါ။ ဒီပညတ်က ဘာပြောသလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့တွေ နားလည်ကြရဲ့လား။
၂၂ ကျမ်းစာထဲမှာ “အာဗြဟံမှာ သားနှစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစေခံကျွန်မ ဟာဂရက ဣရှမေလကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ လွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသမီး စာရာက ဣဇာက်ကို မွေးဖွားခဲ့တယ်။” လို့ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရှုရပါတယ်။
၂၃ အစေခံကျွန်မရဲ့သားက လူ့ရဲ့ဆန္ဒကြောင့် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သားကတော့ ဘုရားရဲ့ဆန္ဒကြောင့် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံကို ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကတိတော်ကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။
၂၄ ဒီ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်က သဘောတူညီချက် နှစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကြပါတယ်။ အစေခံကျွန်မ ဟာဂရက သိနတောင်မှာ ဘုရားသခင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပထမ သဘောတူညီချက်ကို ပုံဆောင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အစေခံကျွန်က ကျွန်တွေကိုပဲ မွေးဖွားပါတယ်။
၂၅ ဒါကြောင့် ဟာဂရက အာရပ်ပြည်က သိနတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီတောင်က မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ယေရုရုလင်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ယေရုရှလင်နဲ့ သူ့ရဲ့သားသမီးတွေက မောေရှေပညတ် အောက်မှာ ကျွန်ခံကြပါတယ်။
၂၆ ဒုတိယ အမျိုးသမီးက စာရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူမက လွတ်လပ်တဲ့ သားသမီးတွေကို မွေးဖွားပါတယ်။ စာရာက လွတ်လပ်တဲ့လူတွေနေထိုင်တဲ့ ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ယေရုရှလင်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
၂၇ “အို အမျိုးသမီး၊ ဝမ်းမြောက်ပါ။ ခင်ဗျားက ကလေး မမွေးနိုင်ဘူး။ တခါမှလဲ ကလေး မမွေးဖူးသလို ကလေးမွေးတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့နာကျင်မှုကိုလည်း ခင်ဗျား မခံစားခဲ့ဘူး။ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ခင်ဗျား ခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားက လက်ထပ်တဲ့အမျိုးသမီးထက် ပိုများတဲ့ကလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ အို အမျိုးသမီး၊ ဝမ်းသာပြီးတော့ အော်ဟစ်လိုက်ပါ။” လို့ ကျမ်းစာက ပြောပါတယ်။
၂၈ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံဆီ ပေးခဲ့တဲ့ ကတိတော်ကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးတော့ စာရာက ဣဇာက်ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ဣဇာက်လို မွေးဖွားခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
၂၉ ဣရှမေလက လူ့ဆန္ဒကြောင့် မွေးဖွားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဣဇာက်က သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆန္ဒကြောင့် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဣရှမေလက ဣဇာက်ကို နှိက်စက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပျက်နေပါတယ်။
၃၀ ကျမ်းစာက ဘာပြောသလဲဆိုရင်တော့။ “အစေခံကျွန်မရဲ့သားက အမွေးစားအမွေခံ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သားက အမွေဥစ္စာကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အစေခံကျွန်မနဲ့ သူ့ရဲ့သားကို နှင်ထုတ်လိုက်ပါ။” လု့ိ ပြောပါတယ်။
၃၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော့်စကားကို နားထောင်ကြပါ။ လွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသမီးက ကျွန်တော်တို့ကို မွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစေခံကျွန်မက မဟုတ်ပါဘူး။ 1 Supposeafather dies in the family. Then all the inheritance goes to his child. During his childhood the heir is no different fromaslave, although he became the master over all the inheritance.
2 The heir submits to his caretakers and managers. He will enter into his inheritance rights when he reaches the age which his father set.
3 I will compare this with the time when Christ did not come to the earth yet. At that time we did not reach the mature age. We lived in this world, and as children, we obeyed the traditions and rules.
4 But God appointed the perfect time and sent His Son. Mary gave birth to the Son of God, and He lived under the authority of the Law of Moses.
5 We were all under the authority of this Law. But Christ fulfilled all the requirements of the Law and paid with His blood for our sins. He paid for our freedom and bought us out from the authority of the Law of Moses. God adopted us, and we got all the rights which children have.
6 You became the sons of God. God sent into your hearts the Spirit which belongs to His Son. The Spirit of His Son calls out to God, “Father, Father!”
7 Listen, now God calls you His son, and notaslave. You became the son of God, and you became the heir of God through Jesus Christ.
8 In the past, you lived without Christ and did not know God. And like slaves, you obeyed visible things. But visible things should not take the place of God.
9 Now you know God. And I will say more, now God knows you. Traditions did not make you strong, but you return to them again. You follow the rules which did not bring you any benefit. Why do you want to become slaves of visible things again?
10 Why do you pay special attention to certain days, months, and seasons?
11 I worked so hard among you. But I am afraid that my work did not bring any result.
12 I amaJew. And you are the Gentiles. But I stopped following the Jewish traditions. I became the same way as you are. Brothers, I beg you, live in the same freedom as I do. When I first came to you then you treated me well.
13 Remember, at that time I was preaching the Good News about Christ to you, though I was sick.
14 My physical condition becameatest for you. But you did not speak to me with contempt. You did not look at me with disgust. On the contrary, you accepted me as an angel of God. You treated me like Jesus Christ.
15 You showed me suchakindness! It is impossible to give your own eyes to another person. But I speak with full confidence that for me you were ready to do even that.
16 But did I now become your enemy because I tell you the truth?
17 You trusted the liars who have no good intentions. These false teachers jealously protect you from my influence. They want to get your attention.
18 Good people always do good, and not only when others watch them. But these liars harm you with their teaching when I leave you.
19 My children, I go through sufferings again and give birth to you again. I will do this until I see the image of Christ in you!
20 I would like to be with you and haveaserious conversation. I do not understand what happened to you.
21 You want to live by the Law of Moses. Tell me, do you understand what this Law says?
22 We read in the Scriptures, “Abraham had two sons. Hagar who wasaslave gave birth to Ishmael. And Sarah who wasafree woman gave birth to Isaac.”
23 The son of the slave was born because of the desire of man. And the son of the free woman was born because of the desire of God. God fulfilled His promise which He gave to Abraham.
24 These two women represent two Agreements. Hagar isaslave, and she gives birth to the slaves. She symbolizes the first Agreement which God made on Mount Sinai.
25 So Hagar is Mount Sinai in Arabia. And this Mount represents earthly Jerusalem. Earthly Jerusalem and its children are in slavery under the Law of Moses.
26 The second woman is Sarah. She gives birth to the free children. Sarah represents the heavenly Jerusalem where the free people live.
27 The Scriptures say, “O woman, rejoice! You cannot have children. You never gave birth, and you did not suffer childbirth pain. You feel abandoned. But you will have many more children thanamarried woman. O woman, rejoice and shout for joy!”
28 When Sarah gave birth to Isaac, God fulfilled the promise which He gave to Abraham. Brothers, we also were born like Isaac.
29 Ishmael was born because of the desire of man. But Isaac was born because of the desire of the Holy Spirit. And at that time Ishmael persecuted Isaac. The same thing happens now.
30 What do the Scriptures say? The son of the slave will not become the heir. The son of the free woman will receive the inheritance. So drive out the slave and her son.
31 Brothers, listen to me. The free woman gave birth to us, not the slave woman.
၁ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွတ်လပ်မှုနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါ။ မောရှေပညတ်တော်ရဲ့ကျွန်ပြုမှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအောက်ကို ပြန်မသွားကြပါနဲ့။
၂ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပေါလုက ခင်ဗျားတို့ကို နောက်ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတုကိ့ အရေဖျားလှီးခြင်း လုပ်ကြရင်တော့ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ရဲ့ ယစ်ပူဇော်ခံမှုကို တန်ဖိုးထားကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
၃ အရေဖျားလှီးခြင်း ခံကြတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ် အတိအလင်း ထပ်ပြောမယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ မောရှေပညတ်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ အားလုံးကို လိုက်နာကြရမယ်။
၄ ဒါပေမဲ့ မောရှေပညတ်က လူတွေကို အပြစ်ကနေ မလွတ်မြောက်စေသလို ဘုရားရှင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်း မပေးပါဘူး။ ပညတ်ချက်ကို ခင်ဗျားတို့ လိုက်နာကြရင် ခရစ်တော်ဆီကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆက်ဖြတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို ခင်ဗျားတို့ ဆုံးရှုံးကြရလိမ့်မယ်။
၅ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ဆီ ပေးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အပြည့်အဝစိတ်ချပြီး စောင့်မျှော်ကြပါတယ်။
၆ ခရစ်တော်ဆီမှာ အရေဖျားလှီးခြင်းရဲ့တန်ဖိုး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အရေဖျားလှီးတဲ့သူနဲ့ အရေဖျားမလှီးတဲ့သူ ကြားမှာ ဘာခြားနားခြင်းမှ မရှိတော့ပါဘူး။ ခရစ်တော်ဆီမှာ ယုံကြည်ခြင်းပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဆက်ဆံကြပါ၊ ဒီနည်းနဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇ ခင်ဗျားတို့က မှန်ကန်တဲ့ ဦးတည်ချက်ကို သွားနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်သူက ရပ်တန့်စေခဲ့တာလဲ။ ခင်ဗျားတို့တွေက ဘုရားရဲ့အမှန်တရားကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဘယ်သူကများ လုပ်ခဲ့တာလဲ။
၈ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို လွတ်လပ်မှုထဲမှာ အသက်ရှင်ဖို့ ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က အယူလွဲတဲ့ သွန်သင်သူတွေကို ယုံခဲ့ကြတယ်။
၉ တဆေး ပမာဏ နည်းနည်းလေးက ဂျုံမုန့်အားလုံးကို ပွစေမယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။ ၁၀ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေက ဒီအယူလွဲတဲ့သွန်သင်မှုတွေနောက် လိုက်သွားကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို အာမခံချက်ပေးပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို လမ်းလွဲစေတဲ့သူဟာ ဘယ်လိုလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေ ဘုရားသခင်က တရားစီရင်မှာ ဖြစ်တယ်။
၁၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ယုဒလူမျိုးတွေက ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်းကြတာလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြရဲ့လား။ ကားတိုင်ပေါ်မှာ တင်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်ဆင့် ဘုရားရှင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် ဟောပြောပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အရေဖျားလှီးခြင်းကတစ်ဆင့် မပေးပါဘူး။
အဲ့ဒါက ယုဒလူမျိုးတွေကို မကျေမနပ်ဖြစ်စေပါတယ်။
၁၂ ခင်ဗျားတို့ကို အရေဖျားလှီးစေချင်တဲ့သူတွေကို အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်ကြပါ။ အယူလွဲတဲ့သွန်သင်သူတွေကို နှင်ထုတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့တွေက ပြဿနာကို ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။
၁၃ ညီအစ်ကိုတို့၊ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ဆီခေါ်ပြီးတော့ လွတ်လပ်မှုကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလွတ်လပ်မှုက ခင်ဗျားတို့ လုပ်ချင်တာမှန်သမျှ လုပ်နိုင်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ ဇာတိဆန္ဒနောက်ကို မလိုက်ကြပါနဲ့။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို လွတ်လပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အစေခံကြပါ။
၁၄ မောရှေရဲ့ပညတ် အားလုံးက “ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်သလို၊ တခြားသူကို ချစ်ပါ။” ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပါတယ်။
၁၅ စကားများငြင်းခုံခြင်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မနှိက်စက်ကြပါနဲ့။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တိရိစ္ဆာန်တွေလို မတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့။ မဟုတ်ရင် ခင်ဗျားတို့တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးမိကြလိမ့်မယ်။
၁၆ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို ပြောမယ်၊ ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တာတွေပဲ စဉ်းစားကြပါ။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့တွေက သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုဆန္ဒနောက်ကို လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို မစဉ်းစားကြပါနဲ့။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိ အလိုဆန္ဒတွေ နောက်ကို မလိုက်ကြမှာ။
၁၇ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိက သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကို ဆန့်ကျင်တော်လှန် နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ ဇာတိဆီကလာတဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။ ဒီ အားနှစ်ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆီကလာတဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကို စဉ်းစားကြပါ။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့က ကောင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားရင်တော့ ဆိုးယုတ်တာတွေကို ခင်ဗျားတို့ လုပ်ကြလိမ့်မယ်။
၁၈ အခု သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်ကို ခင်ဗျားတို့တွေ လိုက်ကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့က မောရှေပညတ်ချက်ရဲ့ အမိန့်အာဏာအောက်မှာ ဆက်ပြီး အသက်မရှင်ကြတော့ပါဘူး။
၁၉ လူတွေက အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားပြီးတော့ သူတို့ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိ အလိုဆန္ဒတွေကို နာခံလိုက်ကြတယ်။ ဒါက သူတို့တွေ အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ပုံစံ ဖြစ်တယ်။
သူတို့တွေက သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေအပေါ်မှာ သစ္စာမရှိကြဘူး။ ပြီးတော့ လိင်ကိစ္စအကျင့်ပျက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ကြတယ်။ သူတို့တွေက ညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်ကြပြီးတော့ ကိလေသာအပျော်အပါးတွေ လိုက်စားကြတယ်။
၂၀ သူတို့တွေက ရုပ်တုဆင်းတုတွေကို ကိုးကွယ်ကြပြီးတော့ အောက်လမ်းအတတ်တွေနဲ့ ပြုစားကြတယ်။ သူတို့တွေက တခြားသူတွေကို မုန်းတီးပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားများကြတယ်။ သူတို့တွေက တခြားသူတွေ အောင်မြင်တဲ့အခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့တွေက အမျက်ဒေါသအရမ်းကြီးကြပြီးတော့ တခြားသူတွေကို ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ သူတို့တွေက အငြင်းပွားစရာတွေကို စတင်ကြပြီးတော့ မှားယွင်းတဲ့သွန်သင်ချက်တွေ နောက်ကို လိုက်ကြတယ်။
၂၁ သူတို့တွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မနာလိုကြပြီးတော့ လူ့အသက်ကို သတ်ကြတယ်။ သူတို့တွေက သောက်စားမူးယစ်ကြတယ်။ သူတို့တွေက အကျင့်စာရိတ္တပျက်တဲ့ဘဝနဲ့ နေထိုင်ကြပြီးတော့ တခြား ဒီလိုမျိုး အပြစ်တွေကိုလည်း ကျူးလွန်ကြတယ်။ အရင်က ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု အဲ့ဒါကို ပြန်သတိပေးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေကို လုပ်တဲ့သူက ဘုရားရဲ့အမွေဥစ္စာကို ရမှာမဟုတ်သလို ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလည်း ဝင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၂ ပြီးတော့ ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားတဲ့လူတွေက သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ အသီးကို သီးကြပါတယ်။ သူတို့တွေက တခြားသူတွေအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြတယ် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတယ် ပြီးတော့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့တွေက အရမ်းစိတ်ရှည်သည်းခံကြပြီးတော့ တခြားလူတွေကို ကူညီဖို့ မငြင်းတတ်ကြဘူး။ သူတို့တွေက ကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ကြပြီးတော့ လူတွေက သူတို့ရဲ့ သစ္စာရှိမှုကို တန်ဖိုးထားကြတယ်။
၂၃ သူတို့တွေက သနားကြင်နာကြပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြတယ်။ မောရှေပညတ်ချက်က ဒီလိုလူတွေကို တရားမစီရင်ဘူး။
၂၄ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိဟောင်းကို လက်ဝါးကားတိုင်မှာ သံနဲ့ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နာကျင်စေတတ်တဲ့ အကျင့်တွေနဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ ဆန္ဒတွေကိုလည်း လက်ဝါးကားတိုင်မှာ သံနဲ့ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၅ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်တော်တို့ဆီ အသက်ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေနောက်ကို လိုက်လျှောက်ကြရမယ်။
၂၆ မဝါကြွားပါနဲ့။ ဝါကြွားခြင်းက တခြားသူတွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီးတော့ မနာလိုခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ 1 Christ set us free. Live in the freedom and do not come back under the burden of slavery of the Law of Moses.
2 And I, Paul, will tell you even more. If you do circumcision, you no longer value the sacrifice of Christ.
3 I declare once again to those who do circumcision. You must keep all the requirements of the Law of Moses.
4 But the Law of Moses does not set people free from sin and does not give them the righteousness of God. If you want to keep the Law then you reject Christ and lose His grace.
5 But we live by the Spirit. In full confidence we expect that through faith God will give us His righteousness.
6 In Christ circumcision lost its power. Now there is no difference between the circumcised and the uncircumcised. In Christ only faith matters. And if you treat each other with love then you will have strong faith.
7 You were going in the right direction. But who stopped you? Who made you go against the truth?
8 God called you to live in freedom, but you trusted the false teachers.
9 Remember thatasmall amount of yeast will ferment all the dough.
10 But the Lord gives me the assurance that you will not follow this false teaching. God will judge the person who misleads you. And it doesn’t matter who that person is.
11 Brothers, do you know why the Jews persecute me? I preach that God gives His righteousness through faith in Christ who was crucified on the cross. I also say that God does not give His righteousness through circumcision. And it offends the Jews.
12 Cut off from your communication those who want to circumcise you. Get rid of the false teachers, and you will get rid of the problem.
13 Brothers, God called you to Himself and gave you freedom. But this freedom does not mean that you can do whatever you want. Do not follow the desires of your sinful nature. God set you free, and now you should serve one another with love.
14 All the Law of Moses speaks about one thing, “Love another person as you love yourself.”
15 Do not torture one another with conflicts. Do not attack one another like animals. Otherwise, you will destroy yourselves.
16 I tell you, think of the spiritual things. And you will follow the desires of the Holy Spirit. Do not think of sinful things. And you will not follow the desires of your sinful nature.
17 Your sinful nature rises against the desires of the Holy Spirit. And the Holy Spirit fights against the desires which come from your sinful nature. These two forces oppose each other. Think of the desires which come from the Holy Spirit, and you will do good deeds. But if you think of sinful things, you will do evil deeds.
18 Now you follow the leading of the Holy Spirit. You no longer live under the authority of the Law of Moses.
19 People think of sinful things and submit to their sinful nature. And this is the way they live. They are unfaithful to their spouse and take part in sexual immorality. They do impure things and indulge in lustful pleasures.
20 They worship idols and practice witchcraft. They hate and quarrel with one another. They get upset when other people succeed. They become furious and do not care about others. They make conflicts and follow false teachings.
21 They envy and murder. They get drunk, live immoral life and do other sins like these. I warned you in the past, and I repeat it again. The person who does such things will not receive the inheritance of God and will not enter into the Kingdom of God.
22 And people who think of the spiritual things bear the fruit of the Holy Spirit. They treat one another with love. They are full of joy and peace. They showalot of patience and do not refuse to help others. They do good deeds, and people value their faithfulness.
23 They are kind, and they are able to discipline themselves. The Law of Moses does not condemn such people.
24 We belong to Christ. And we nailed our old sinful nature to the cross together with its harmful habits and sinful desires.
25 The Holy Spirit gave us life. So we must think of the spiritual things and follow the desires of the Holy Spirit.
26 Do not boast. It annoys others and brings envy.
၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က အပြစ်စလုပ်လာခဲ့တယ် ဆိုပါစို့။ ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာရှိတဲ့ ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်တဲ့လူတွေက ဒီလိုလူမျိုးကို ပဲ့ပြင်ပေးရမယ်။ သူတို့တွေက သနားကြင်နာမှုနဲ့ ပဲ့ပြင်ကြရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ညီအစ်ကို မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခုခံတွန်းလှန်ဖို့ ခင်ဗျားတို့အားလုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိနဲ့စောင့်ကြည့်ကြရမယ်။
၂ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကူညီမစကြပြီးတော့ အခက်ခဲတွေကို အတူတကွ ကျော်ဖြတ်ကြပါ။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ကို ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ ပညတ်သစ်ကို ဒီနည်းနဲ့ ခင်ဗျားတို့က ပြည့်စုံစေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃ ဒါပေမဲ့ တချို့လူတွေက တခြားသူတွေကို မကူညီကြဘူး။ သူတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့သူတွေလို့ ထင်ကြတယ်။ ဒီလိုလူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့က အရေးကြီးတဲ့သူတွေ လုံးဝ မဟုတ်ကြပါဘူး။
၄ ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကို ဆန်းစစ်ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာမှာ ပျော်ရွှင်ကြပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ခင်ဗျားတို့က တခြားလူတွေရဲ့ ထောက်ခံသဘောတူညီမှုအပေါ် မှီခိုနေကြမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
၅ ခင်ဗျားရဲ့ဘဝအတွက် တာဝန်ခံမဲ့သူဟာ ခင်ဗျားပဲဆိုတာ သတိရပါ။
၆ ခင်ဗျားတို့ဆီ ဘုရားသခင်ရဲ့စကား သင်ကြားပေးသူတွေကို မစကူညီကြပါ။ ခင်ဗျားတို့မှာ ရှိသမျှအရာအားလုံးကို သူတို့တွေနဲ့ မျှဝေကြပါ။
၇ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလိမ်ညာကြပါနဲ့၊ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကို အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့က ခင်ဗျားတို့ စိုက်ခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေကထွက်တဲ့ အသီးအပွင့်ကို ရိတ်သိမ်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
၈ ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိကို နာခံတဲ့သူက အပြစ်မျိုးစေ့တွေကို စိုက်ပျိုးပါတယ်။ ဒီလိုလူက သေခြင်းအသီးအနှံကို ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကို နာခံတဲ့သူက သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော် မျိုးစေ့တွေကို စိုက်ပျိုးပါတယ်။ ဒီလိုလူက ထာဝရအသက်အသီးအနှံကို ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။
၉ မှန်ကန်တာကို လုပ်ပါ။ ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေ စိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာ ပင်ပန်းတယ်လို့ မခံစားကြပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့တွေ အားမလျှော့ကြရင် အချိန်တန်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသီးအနှံကို ရိတ်သိမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ လူအားလုံးကို ကူညီဖို့ အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။ ဒါပေမဲ့ အရင်ဦးဆုံး ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ ဘုရားရဲ့မိသားစုတွေဆီကို ကောင်းမှုတွေ လုပ်ပေးပါ။
၁၁ အခု ကျွန်တော့်လက်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ဆီကို စာရေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စာလုံးအကြီးတွေနဲ့ရေးထားတာ ခင်ဗျားတို့ တွေ့ကြတယ် မဟုတ်လား။
၁၂ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ခရစ်တော်ရဲ့ လက်ဝါးကားတိုင်ကတစ်ဆင့် ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ အရေဖျားလှီးခြင်းကတစ်ဆင့် ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ဟောပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ယုဒလူမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်းနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကို ကြောက်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို အရေဖျားလှီးခြင်းခံဖို့ အတင်းတိုက်တွန်းတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက သူတို့ရဲ့အရေဖျားလှီးခြင်းကို ဂုဏ်ယူကြပြီးတော့ ခရစ်တော်ရဲ့ လက်ဝါးကားတိုင်ကို တန်ဖိုးမထားကြတော့ဘူး။
၁၃ အဲ့ဒီ အရေဖျားလှီးခြင်း ခံကြတဲ့သူတွေက မောရှေပညတ်ချက်ကို မလိုက်နာကြဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ခင်ဗျားတို့ရဲ့အရေဖျားလှီးခြင်းအကြောင်းကို ဝါကြွားချင်လို့ ခင်ဗျားတို့ကို အရေဖျားလှီးစေချင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘာကိုမှ မဝါကြွားချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ကိုပဲ ကျွန်တော် တန်ဖိုးထားတယ်။ အခု ကျွန်တော်နဲ့ လောကကြီးကြားမှာ လက်ဝါးကားတိုင်က ရပ်ထားတယ်။ လောကကြီးကို ကားတိုင်ပေါ်မှာ ကျွန်တော် သံမှိုနဲ့ရိုက်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ လောကကြီးက သေသွားပါပြီ။ ပြီးတော့ လောကကြီးကလည်း ကျွန်တော့်ကို ကားတိုင်ပေါ်မှာ သံမှိုနဲ့ရိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ကျွန်တော်လည်း လောကကြီးအတွက် သေသွားပါပြီ။
၁၅ အခု ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူက အရေဖျားလှီးခြင်းခံတယ် ဒါမှမဟုတ် အရေဖျားလှီးခြင်းမခံဘူး ဆိုတာတွေ အရေးမကြီးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့သဘောသဘာဝသစ်ကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူဆီ ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားက ဘုရားသခင်ရဲ့သတ္တဝါအသစ် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၆ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ကတစ်ဆင့် ဘုရားရဲ့လူမျိုးသစ် ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အရေဖျားလှီးခြင်းကနေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့အပေါ် သနားကရုဏာထားပြီးတော့ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရှင်ရဲ့ဣသရေလလူမျိုး ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁၇ ဘာဖြစ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော့်ကို ဆန့်ကျင်ကြတာလဲ။ သခင်ယေရှုအတွက် ကျွန်တော် ဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့ရပြီးပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း ဒဏ်ရာတွေရဲ့အမာရွတ်တွေ ရှိပါတယ်။
၁၈ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်က မင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူ ရှိပါစေ။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 Brothers, suppose that one of you fell into sin. In this case, there are some spiritual and mature people among you who can correct suchaperson. But they must do it with kindness. All of you must watch over yourselves and resist the temptation which your brother failed to resist.
2 Help one another and go through the difficulties together. This way you will fulfill the New Law which Christ gave us.
3 But some people do not help others. They think that they are too important. Such people deceive themselves, they are not important at all.
4 Evaluate your actions and enjoy what you do. Then you will not depend on the approval of other people.
5 Remember that you are the person who is responsible for your life.
6 Help those who teach you the Word of God. Share with them everything what you have.
7 Do not deceive yourselves and do not blame God. You will gatheraharvest from the seeds which you planted.
8 The one who pleases his sinful nature plants the seeds of sin. Suchaperson will gatheraharvest of death. But the one who pleases the Holy Spirit plants the seeds of the Holy Spirit. Suchaperson will gatheraharvest of eternal life.
9 Do what is right. Do not get tired of planting the good seeds. If we do not get weak then the right time will come when we will gather our harvest.
10 Do not miss the opportunities and help all the people. But first of all, do good to those who belong to the family of God.
11 Now I am writing to you with my own hand. Do you see that I am writing with big letters?
12 We preach that God gives His righteousness through the cross of Christ, and not through circumcision. And the Jews persecute us because of this. But there are those who are afraid of persecutions, and they force you to do circumcision. Such people are proud of their circumcision, and they do not value the cross of Christ.
13 You should know that those who do circumcision do not keep the Law of Moses. But they want to circumcise you because they want to boast about your circumcision.
14 And I do not want to be proud of anything. I only value the cross of our Lord Jesus Christ. Now the cross stands between me and the world. I crucified the world and the world has died to me. And I died to the world because the world crucified me.
15 Now you belong to Christ. And it is not important who is circumcised or who is uncircumcised. But this is what matters most — God gave to your inner person His new nature. You areanew creation.
16 You became new nation of God through the cross of Christ, and not through circumcision. God had mercy on you and gave you peace. Now you are the Israel of God.
17 Why do you oppose me? I already suffered for the Lord Jesus, and there are scars from wounds on my body.
18 Brothers, may the grace of our Lord Jesus Christ fill your spirit. Amen.